Guddoomiye Jawaari oo casuumaad ka heley dhigiisa Suudaan | Somali National Television - sntv.so
Home WARARKA MAANTA Guddoomiye Jawaari oo casuumaad ka heley dhigiisa Suudaan
Guddoomiye Jawaari oo casuumaad ka heley dhigiisa Suudaan
Kulanka guddoomiyaha golaha shacabka mudane Maxamed Sheekh Cusmaan (Jawaari) uu maanta la qaatay safiirka dowadda Suudaan ee Soomaaliya Mohamed Yousir Abdelmanan ayaa waxa ay kaga hadleen dhowr arimood oo ay ka mid tahay xoojinta xiriirka labada wadan.
Ugu horeyn safiirka Suudaan ee Soomaaliya Mohamed Yousir Abdelmanan ayaa guddoomiyaha golaha shacabka Soomaaliya u keenay warqad casuumaad ah oo uu kaga siday xafiiska baarlamaanka ee dalka Suudaan taas oo guddoomiyaha golaha shacabka looga codsanaayo inuu booqasho ku tago dalka Suudaan si loo xoojiyo wada shaqeynta iyo iskaashiga labada baarlamaan.
Sidoo kale, safiirka iyo guddoomiyaha golaha shacabka ayaa ka wada hadlay xaaladaha guud ee dalalka Carabta iyo siyaasada guud ee dalalka Carabta ,waxaana guddoomiyaha golaha shacabka mudane Maxamed Sheekh Cusmaan (Jawaari) uu uga mahad celiyay Safiirka Suudaan ee Soomaaliya sida wanaagsan ee uu mar walba uga shaqeeyo horumarinta iyo xoojinta xiriirka labada dal.
Dowladda Suudaan ayaa waxa ay waxa ay ka mid tahay dowladaha Soomaaliya ka taageera dhinacayo kala duwan oo ay ka mid yihiin dhinacyada waxbarashada iyo tababarida ciidamada.
Previous articleXoolo ay soo dhaceen Al-shabaab oo lagu qabtay Qoryooley”Sawirro
Next articleR/Wasaare Khayre oo xarigga ka jaray Xafiisyo lagu qabto Cabashooyinka dadweynaha